I ukuthanda Rio de Janeiro
I LOVE RIO kuyinto isethulo Rio de Janeiro nge nokuchazwa zokuhlalisana, zamasiko nezomlando zonke izici ezenza emzini gem amahle eyingqayizivele ukuthi namuhla.
Njengoba iklanyelwe kokubili kwezokuvakasha izinga and ngokujulile ucwaningo, Portal kuyinto ukungcebeleka virtual kanye amakhona eziningi Rio ukuthi, ngoba ukuntuleka isikhathi noma ithuba, angeke ngokuqondile olutholwa iningi izivakashi, sivumele kubo ukuthola ubukhulu efihliwe umuzi.
The Iwebhusayithi ILOVERIO.comkuyingxenye I LOVE Rio portfolio imikhiqizo, ngamunye usebenzisa indlela ezihlukene ukuba sithuthukise futhi ukuthola umfanekiso namasiko ethakazelisayo Rio de Janeiro, idolobha kanye nesimo.
Jewels emhlabeni Rio de Janeiro idolobha kanye isimo Ulwazi futhi iseluleko ezinye the arcade izinkambo, uhambo, Kuzonyuka, futhi kancane aziwayo dalulwa ukuba abafundi nezivakashi. I LOVE Rio kuletha tips okuningiliziwe kanye ezikhethekile sendlela umhlabeleli ukujabulela zemvelo ezihlukahlukene - izintaba, amabhishi, amapaki, nokuningi. Kusukela ephelele photo ithuba, ukuze izindlela usuku lina, kanye amakilasi kanye nokuvakashela. The Portal uzibophezele ekuhlinzekeni ethakazelisa kakhulu, kumnandi futhi isipiliyoni ngamasiko akhuthazayo izivakashi leli dolobha, kuhlanganise ukwaziswa kanjani ukufinyelela kunoma iyiphi ingxenye ye Rio, futhi lapho ukuthola iziqondiso umhlabeleli.
I LOVE RIO nothando isiko, futhi ubheka ukumboza ingcebo enkulu lokusungula wobuciko glitters kulo lonke idolobha. Repertoire Rio sika isiko bendabuko uqikelele, kuhlanganise ifilimu imikhosi, yaseshashalazini imikhiqizo, yezobuciko, kanye dance imibukiso. Ukubonakaliswa Ingcweti kusukela okusezingeni ekupheleni yemidlalo ukuze favela ingcebo tikhombise ukuba abafundi, wanezela ukuthungwa okukhulu isithombe emzini amasiko. The Iwebhusayithi imininingwane ukuzilibazisa zansuku zonke wengeze nekhangayo futhi uhlamvu emzini, kusukela ikhayithi ezindizayo art graffiti, dance amakilasi unique Carioca izinkulumo, isimo sengqondo kanye ukuziphathisa.
Ukudla kuyingxenye eyinhloko zakhe isithombe of Carioca isiko, ukudlala indima ebalulekile ekuphileni komkhaya ekuxhumaneni komphakathi, futhi wafakaza kwemvelo mlando komuzi. Jewels Gastronomic at imigoqo, zokudlela kanye dinner namatafula ukumela umphakathi ocebile, yokulinga futhi ngamasiko basamukela. I LOVE Rio ezambula ezinye cuisine lekhethelo wakhonza zokudlela kulo lonke idolobha, kusukela omakhelwane acebile ukuba favelas. Umlando kanye nokuthuthukiswa elisisekelo Carioca izitsha abelethwe ngaphandle wasethula eceleni ngaphakathi nelungelo kokuxazulula and tips.
The edolobheni laseRio isibe iphayona international ukuzibophezela yayo umzimba, impilo kanye yengqondo nenhlalakahle. I LOVE Rio ezambula imfanelo imibuso, ukuzilibazisa , amathiphu namasu, kusukela Carioca ukugijima gyms endlini futhi ongaphandle, yoga, ukuzindla, futhi amathiphu nutritional zamuva. Spas, retreats, supplements nokunakekela siqu zibhekiwe, ngokuletha izakhamuzi nezivakashi Ukuqhamuka siqonde indlela bazakhele nokuthuthukisa kokubili emzimbeni nasengqondweni. I LOVE Rio amashadi nokuthambekela ethandwayo yokuthi bakha usuku nosuku ukwakheka Carioca ukuphila.
Famous embulungeni yonke umculo esiyingqayizivele, ukhombise impilo futhi ngamasiko Lubanzi kube izele ukuba, Rio uhlala elinye lamadolobha ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni kanye nokusatshalaliswa izinhlobo ezintsha. The Portal ihlola kwezinkathi ebalulekile emlandweni musical ngokujulile leli dolobha, ngani ithalente ezintsha kanye akhiphe ulwazi mayelana amakhonsathi zakudala imibukiso, imikhosi kanye amaqembu e samba, forró, jazz, chorinho, maracatu, nokunye okuningi. Umculo kuyingxenye ebalulekile Carioca isiko, angewona umuntu, akuyo yonke izici zokuphila emzini.
Isimo sezulu esifudumele, uthando umculo, sociability kokuzalwa Cariocas 'futhi predilection yabo ngenxa ukujabulela ukuphila baye benza Rio ingenye yezindawo esiyingqayizivele kunazo futhi esimnandi nesiqinisayo ababa naso for oxokozelayo sasebusuku. I LOVE Rio imimoya ngokusebenzisa izifunda esishukumisayo emzini, ukhwela nelizintaba zalo futhi engena nemigoqo yalo kusukela kusihlwa kuya dawn ukuletha ulwazi abafundi okuthakazelisa kakhulu ukuzilibazisa sasebusuku. Imigoqo Snooker, rock amaqembu, nights samba, yamathanga street, amaqembu ezazifundiswe zomkhosi kuthiwa bathola, kanye eyinkimbinkimbi kakhulu, exotic and kuyachwaza imigoqo - ukudla, iziphuzo, umculo kanye amakhasimende.
I nezimfashini yesiteleka kakhulu futhi wesimanje for amadoda nabesifazane Rio de Janeiro ethulwa - ukuhlinzeka siqonde izitayela zakamuva zokugqoka emsebenzini, amaqembu, ezemidlalo, imicimbi, ukuzilibazisa kwansuku kanye beach. Ukuthuthukiswa komlando omhlaba kanye kazwelonke style izitayela unikezwa look-in lokwakha abafundi ngomuzwa ukubaluleka zezenhlalo nezombusazwe ifomu art. Ibhayisikobho imijiva kanye nezingubo ukuba bikinis nokubhukuda iziqu, a catwalk of style imibono ingalendlela futhi zilethwe abafundi ukubasiza bavuselele umdlandla ikhabethe zabo futhi baqonde Carioca yobuhle.
Cariocas ukuthanda sport - kusuka ibhola paragliding, futhi konke phakathi. Njalo beach, ihlathi nomzimba amanzi in Rio kufakazela iqiniso lokuthi Cariocas kukhona phakathi ngikhuthazela uthando-emcimbini kanye nezemidlalo kanye ukuqina. I LOVE Rio ichaza ukuzilibazisa yezemidlalo ezintabeni, amabhishi, ulwandle kanye nomoya, nokunikeza iseluleko namathiphu okuthi ungawusebenzisa kanjani ukuba ahileleke, kanye izindaba eziningi ezimnandi futhi lidalula. Ezemidlalo Professional futhi populist ezihlanganisiwe eceleni ukuthambekela yanamuhla efana nokunensa-lining kanye isigwedlo ume-up, kanye ulwazi Kuzonyuka, amakilasi, amaqembu endawo, gyms kanye nemicimbi yokuncintisana.
Umlando Rio de Janeiro unothe kakhulu, ehlukahlukene kanye multi-namasiko. I LOVE Rio unpicks ukuthuthukiswa yokuqala namasiko nemikhuba, ukufika ubuciko kanye namasiko ezivela emhlabeni wonke futhi ukuzalwa sezakhiwo omuzi. Inikeza imininingwane ethakazelisayo kwemvelo omakhelwane, umsuka wemikhosi, amaqembu, izinhlobo, amathelevishini imibukiso nezimfashini, kanye izithombe evocative of the esidlule, kusukela ikhofi emasimini elidala kwekhulu le-19 kuya mkhosi kwekhulu lama-20 kanye effervescent Musically 1970 futhi 80.
Azi ukubaluleka Rio olukhulayo emakethe global, Portal inikeza uhlu olubanzi ulwazi mayelana umnotho wedolobha, ezifanele ibhizinisi abantu, osomabhizinisi kanye zezomnotho. Ukuze kwandiswe ukuqonda nokuqaphela ewusizo imibono mayelana nendlela yokuqhuba ibhizinisi futhi bahlanganyele nesiko emakethe zinikezwa. Izimboni Ukwandisa futhi amabhizinisi endawo zisekujuleni isikhungo isigaba, kanti amathiphu, amasu kanye oxhumana ewusizo for osomabhizinisi bourgeoning kanye nosomabhizinisi kwembulwe.
Behleli nje yonkana bay Rio sika wakhe udadewabo-umuzi, laseNiterói. Ingxenye ye I LOVE project Rio ukuba abe banzi amabhokisi ukuqapha umnikelo ocebile zamasiko turky of isimo Rio, Portal uhlola ngokuningiliziwe zonke izici oluyingqophamlando ikhathalogi laseNiterói sika. Golden, emabhishi ngasese, izakhiwo, iminyuziyamu, zokubukela amabhayisikobho, amapaki, izinkambo, imibono ezihlaba umxhwele, zokudla, yeshashalazi, ezemidlalo imincintiswano futhi ukuzilibazisa , kanye engqondweni ukuba kwezinkathi ezibalulekile emlandweni ndawo, ngqó abeke laseNiterói at the heart of yembuso ebabazekayo, kungamanyathelo amasiko nokuhlakanipha.
Eqaphela ukubaluleka kanye ubuhlobo synergic phakathi dolobha kunenqwaba yamadolobha que ichashazi isimo, I LOVE Rio Inikeza imininingwane iso-kokuvula mayelana imizi, izifunda kanye nemiphakathi que amanga ngaphandle omakhelwane odumile. Zonke ematsheni nasemakhoneni umbuso zibhekiwe ekuphishekeleni kufihlwe amasiko, social and gastronomic amagugu. I LOVE Rio ichaza izenzakalo ezingokomlando kanye namathafa amahle izifunda, okwembula ezibalulekile futhi eyingqayizivele indima que ngamunye nemidlalo e Indwangu jikelele isimo.
I LOVE Rio izithombe ahlukile, futhi ngeke ezitholakala ncwadi. Engele, ukukhanyisa, izifundo kanye ukwakheka bakhethwa ngokucophelela zokuqinisekisa que ifotho ngamunye ehlukile futhi ithumba isici umuzi in ukukhanya okuqabulayo. State of the imishini art lisetshenziswa kuyo yonke inqubo, ukwakha izithombe eliphezulu kakhulu. Isisekelo ifilosofi enezithombe I LOVE Rio kuyinto drive wasithatha ukuxhumana phakathi kwabantu kanye izikhala. Izindawo futhi emphilweni kuyizinto axhunyiwe, ukuchaya namathafa ejulile umphumela que Rio sika emangalisa nasemadolobheni nezimangaliso babe izakhamizi kanye nezivakashi.
I LOVE RIO okukhangiswayo omhlaba online futhi esivela okusezingeni izinhlelo ukubonakala ukubambisana, lafinyelela abafundi eyaziwa ukuba nesithakazelo izihloko, isitayela kanye ifilosofi I LOVE Rio. Indawo main wokwaba embonini izihambi in Rio de Janeiro zihlanganisa edumile South Zone amahle Barra da Tijuca, ngokugxila ikakhulu ezindaweni eyingqopha kanye namahhotela. The Iwebhusayithi ILOVERIO.comkuyingxenye global I LOVE Rio portfolio imikhiqizo que kuhlanganise abacebile Portal web ukuphayona Yikuphi ihlola futhi kabusha ucabanga emzini ebubanzini kokuhlanganyela izihloko wesimanje, kanye Izinkulungwane umoya-ukuthatha izithombe.
Isakhiwo The Portal ezintsha futhi design, iyenze ukuze yimuphi omunye umuzi emhlabeni, ecebile in okuqukethwe Ngisemncane kalula, kuphumele umkhiqizo wezinga eliphakeme kakhulu nokubaluleka ezibanzi abafundi international. Ahlungwe advertising ukubambisana luyatholakala, kuhlanganise amabhanela elula umphelelisi Portal sika semibhalo nokuqukethwe lokushicilela, futhi multi-page sici izihloko. Ezinye izinketho zihlanganisa iminikelo creative nokubambisana zenzelwa eyaziwa ukuba uzuze kakhulu Izibukeli, abaxhasi, futhi umuzi wonke. Izindleko kanye nokutholakala sizimisele Ngokusho yobukhulu isikhangiso, ifilosofi, futhi umyalezo.